Golaha Ammanka ee QM oo maanta kulan ka yeelanaya xaaladda murugsan ee Soomaaaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
New York, July 29 – Golaha Ammaan ee Qaramada Midoobay ayaa maanta kulan ballaaran ka yeelanaya xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya, kulankaasi oo ay ku dhan-yihiin 15 xubnood ee joogtada ah ee QM.
Shirkaan golaha ammaanka ee QM ee maanta ka dhici doona xaruntooda NewYork, ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidii gacan buuxda loo siin lahaa dawladda KMG ah ee Soomaaliya oo qarka u saaran in ay afganbiyaan xooggag Islaamiyiin ah oo is-bahaystay.
Inta aysan bilaaban doodda xubnaha goluhu ayaa waxaa halkaasi warbixin dheer ka jeedin doona xoghayaha guud Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon, taasi oo ah mid sadexdii bilood mar xoghayuhu uu ka soo aruuriyo arrimaha dalka Soomaaliya.
Warbxinta xoghayaha guud ee QM ee ku aaddan arrimaha dalka Soomaaliya oo nuqullo ka mid ah ay heshay saxaafaddu, ayaa tilmaamaya xaaladda muransan ee dalka Soomaaliya iyo sida hadda loogu baahan yahay beesha caalamku in ay u soo jeedsato Soomaaliya, waxaana xaghayuhu warbixintiisa kaga codsaday waddamada xubnaha ka ah golaha ammaanka ee QM in ciidamo caalami ah loo diro Soomaaliya si loo bad-baadyo dawladda KMG ah ee Soomaaliya.
Kulanka golaha ammaanku maanta uu ka yeelanayo Soomaaliya, ayaa lagu wadaa in ay ka soo baxaan arrimo badan oo ku aaddan Soomaaliya iyo sida loo arko xalkeeda, waxaana goluhu ka baaraan-degi doono in cunoqabatayn la saaro iyo in kale dawladaha loo arko in ay ku lug leeyihiin mashaakilka Soomaaliya iyo waliba shaqsiyaad Soomaali ahba, waxaana si gaar ah farta loogu fiiqay dawladda Eritrea.
Dawladda Eritrea dhowr jeer oo hore ayaa goluhu u soo jeediyey digniino ku aaddan in ay faraha ka laabata arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan gacan-siinta xooggaga dawladda ku kacsan oo lagu eedyey in ay siiso taareego dhaqaale iyo mid millatari oo aan gabasho lahayn, hase yeeshee Eritrea waa ay beenisay eedaymahaasi.
Fadhiga golaha ammaanka ee maanta uu ka yeelanayo arrimaha Soomaaliya, ayaa qeyb ka ah dadaalo beesha caalamka looga doonayo in la taageero dawladda KMG ah ee Soomaaliya si ay iskaga difaacdo weerarada kaga imaanaya xooggaga islaamiyiinta ah ee is-bahaystay ee Al-shabaab iyo Xisbu-Islaam.